चिकित्सक संघमा कस्तो नेतृत्व रोज्ने?
२०७६ माघ १ बुधबार ०८:००:०० प्रकाशित
हामी नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनको संघारमा छौं। दुई वटा समूहगत प्रयास र केही व्यक्तिगत प्रयाससहित हामी उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा छौं, मतका लागि देश दौडाहामा छौं।
चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी कति सन्तुष्ट छन्, कति सुरक्षित छन् र कति सम्मानित छन् भन्ने विषय केवल चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको हितको विषय नभई स्वस्थ देश निर्माणको एक अनिवार्य आवश्यकता पनि हो। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको बढ्दो विदेश पलायन, बहुसंस्था र क्लिनिकमा धाउनुपर्ने बाध्यता, बारम्बार सामना गर्नुपर्ने भौतिक आक्रमण आदि चिकित्सक मात्र नभई स्वास्थ्य सेवाकै कमजोर अवस्थाको मानक हो।
चिकित्सकहरुमा जुन नैराश्यता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, त्यो समाजकै लागि हानिकारक छ। यो नैराश्यतालाई बदल्ने, चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवामा योगदान गरेरै आफ्नो भविष्य देख्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ? मुख्य एजेन्डा यही हो।
कस्तो नेतृत्व रोज्ने ?
मूलतः दुई समूहमध्ये एक हो, डा लोचन कार्कीले नेतृत्व गरेको पेसागत तथा लोकतान्त्रिक समूह। अर्को पेसागत समावेशी समूह डा पुष्पमणि खरालको नेतृवमा रहेको छ। पेसागत तथा लोकतान्त्रिक समूहले अनुभवी नेतृत्व नै आफ्नो सवल पक्ष मानेर प्रचारप्रसार गरिरहेको छ भने खराल नेतृत्वको पेसागत समावेशी समूहले सक्रियता साथ चिकित्सककै लागि लागिपर्ने ‘प्रोएक्टिभ लिडरसिप’ नै आफ्नो पहिचान हुने भन्दै प्रचारप्रसार गरिरहेको छ।
लोकतान्त्रिक समूहका वर्तमानका धेरैजसो उम्मेदवार पुराना हुनुहुन्छ। विगतमा उहाँहरुले सोचेजस्तो सकारात्मक परिणाम निकाल्न र चिकित्सकका समस्याको नीतिगत हल गर्न सफल नभएको हुँदा अनुभवको दावी कमजोर र फितलो छ भन्न सकिन्छ।
अर्कोतिर डा खरालको समूह नेपाल चिकित्सक संघका लागि नयाँ अनुहार हो। यो समूहमा चिकित्सक वा रेजिडेन्ट तथा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरुको हक–हितमा योगदान गर्न सकेका र उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकाहरु छन्। अध्यक्षका उम्मेदवार डा खराल पदमा नहँुदा पनि चिकित्सकको हक–हितमा लामो समयदेखि सक्रिय छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेजहरुमा चिकित्सक हकहितका आन्दोलनहरु सफल पार्न भूमिका खेलेका र नेतृत्व लिएका चिकित्सकहरुको समूहले गर्दा एक पटक चिकित्सक संघमा नयाँ नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ।
साथै चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक विद्यमान कानुनी प्रावधान तथा आवश्यक संशोधनवारे समेत पेसागत समावेशी समूह जानकार रहेको हुँदा संघको नेतृत्वमा नीतिगत सुधारको लागि संघर्ष गर्ने समूह नै आवश्यक छ भन्ने लागेको छ।
अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा खरालले पूर्णकालीन रुपमै चिकित्सक संघमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसक्नु भएको छ। तसर्थ यो घोषणा मात्र र सस्तो लोकप्रियता नभई व्यवहारमा नै लागू गर्ने प्रतिवद्धता हो। चिकित्सकका समस्या र चुनौतीको चाङ ठूलो भएकाले अब हाम्रा लागि पूर्णकालीन नेतृत्व अपरिहार्य भइसकेको छ।
प्रजातान्त्रिक अभ्यास र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने विषय
कुनै पनि संगठन गतिशील र परिणाम दिने गरी सक्षम हुन उक्त संगठनको निर्माण तथा मूल्यांकनको मूल माध्यम निर्वाचन हो। जसमा रहने सहभागिता र प्रजातान्त्रिक अभ्यास कस्तो छ त? हामीले त्यो पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ। सबै निर्वाचनहरु यथोचित रुपमा सहभागितामूलक र प्रजातान्त्रिक नरहन सक्ने तथ्यप्रति चिकित्सक मात्र नभई आम जानकार नै छन्।
नेपाल चिकित्सक संघलाई पनि थप सशक्त बनाउन नेतृत्वले संगठनको सदस्यता र मत ग्रहणलाई व्यापक बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो। आम चिकित्सकको अधिकार र चिकित्सक संघको साँच्चिकै चिन्ता हुन्थ्यो भने एक तिहाइ सदस्य र सोको पनि आधामात्र मत खस्ने अवस्था किन रहिरह्यो। केही बढेको सदस्यता पनि चुनावको मुखैमा थपिएकाले उति सुखद मान्न सकिँदैन। सदस्य बन्ने र मत हाल्ने अधिकार सबैलाई छँदै छ भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला तर प्रक्रिया सहज भइदिएन। सायद हामी चिकित्सक सबै सचेत भएको भए त्यो अधिकार पनि प्रयोग हुन्थ्यो होला। चिकित्सकहरुबाट पनि त्यो कमजोरी भएको छ।
तर सदस्यता लिन र मत खसाल्न प्रेरित नहुने अवस्थाको जिम्मेवारी त फेरि पनि नेतृत्वले नै लिने हो। विगतको चिकित्सक संघले किन अनलाइन सदस्यता र अनलाइन मतदान गर्न सकेन वा चाहेन? यसको उत्तर खोजिनुपर्छ।
संघमा अनलाइन सदस्यता र अनलाइन मतदानको व्यवस्था हुनुपर्छ। इसमा हामीले प्रतिवद्धता जनाइसकेका छौं। त्यतिमात्र नभएर भविष्यका चिकित्सक वा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरुलाई एसोसिएट सदस्यतामार्फत आवद्ध गर्ने र मुख्यतयाः निजी मेडिकल कलेजहरुमा उनीहरुले भोगेका समस्या समाधान गर्ने वैधानिक संगठन नेपाल चिकित्सक संघ हुनुपर्छ। यो प्रतिवद्धता पूरा गर्न कुनै संघर्ष वा आन्दोलन चाहिँदैन, केवल नेतृत्वको इच्छा हुने हो भने सहजै पूरा हुनसक्छ।
भोलिका दिनमा जुनसुकै समूह वा उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरे पनि चिकित्सकका सुरक्षा, तलब आदि विषय तत्कालै समाधान गर्न सजिलो अवश्य छैन। कानुनी वाधाहरु फुकाएर नीतिगत व्यवस्था गर्न एक सक्षम चिकित्सक संघको आवश्यकता पर्छ। यदि हामीले सदस्यतालाई व्यापक र मताधिकारलाई सहज बनाउन मात्र सक्यौं भने पनि चिकित्सक संघसित सरकारलाई डिल गर्न र आवश्यक परे संघर्ष गर्न अर्कै लेवलको सामथ्र्य रहने छ।
चिकित्सकहरुलाई विभाजन गरी एकता भाँड्ने र चिकित्सकका संघर्ष फितलो बनाउने प्रयासहरु असफल हुन्छन्। प्रत्येक चिकित्सकले चिकित्सक संघप्रति चासो राख्ने छ र प्रत्येक सदस्यको हकहितमा बोल्नुपर्ने चिकित्सक संघको अनिवार्यता हुने छ। आम चिकित्सक के चाहन्छन् त्यो नै चिकित्सक संघको एजेन्डा बन्ने छ। हामी संघलाई काउन्सिलमा दर्ता भएका र भोलिका चिकित्सक सबैको आफ्नो संस्था बनाउन चाहन्छौं, न कि सीमित केही चिकित्सकको।
सरकारी चिकित्सकका सन्दर्भमा
चिकित्सकका तलब सुविधा, सुरक्षा तथा पेसागत गरिमा हामी सबै चिकित्सकको साझा हो। तर कर्मचारी समायोजन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सरकार मातहतका निकायको संगठन संरचना चिकित्सकको अपहेलना गर्ने, भूमिकाविहीन बनाउने र वृत्ति विकासलाई कुण्ठित गर्ने खालको छ। उक्त विषयमा संघले कुनै ठोस पहल नगरेकोले सरकारी चिकित्सकमा नैराश्यता उत्पन्न गरेको छ।
विभिन्न तहका सरकारहरुको स्वास्थ्य सेवाको नीति निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण स्थानमा चिकित्सकको भूमिका स्थापित गरेर मात्र सवल स्वास्थ्य सेवा र आम चिकित्सकहरुको पक्षमा नीति निर्माण गर्न सकिन्छ। यस विषयमा संगठन संरचना पुनरावलोकन र समायोजनको विषयमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेर वा मौजुदा कानुन संशोधन गरेरै भए पनि चिकित्सकले अपमानित र वृत्ति विकास कुण्ठित हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयन जस्तो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डासँग जोडिएको विषय हुनाले धेरै लविङ आवश्यक पर्ने प्रष्ट नै छ।
पेसागत समावेशी समूह आम चिकित्सकमाझ एक विकल्प भएर आएको छ। नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो पनि बनाएको छ। उम्मेदवारीबाटै पेसागत समावेशी समूह चिकित्सक संघलाई सीमित घेराभन्दा माथि उठाएर व्यापक बनाउन खोजेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।
संघमा नौलो नेतृत्व नै आवश्यकता हो। नयाँ नृतृत्वले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेमा अर्को चुनावमा यो भन्दा उत्तम विकल्प रोज्नुपर्छ नै, सुधार यही प्रक्रियाबाटै हँुदै जाने हो। राजनीतिक लगायत विभिन्न आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर मतदान गरौं।
-(डा विष्ट पेसागत समावेशी समूहबाट सदस्य पदका उम्मेदवार हुन्)